प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदैँ गर्दा माधव नेपालले प्रचण्डसँग गरे गोप्य भेटवार्ता ! - Rising Dainik
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदैँ गर्दा माधव नेपालले प्रचण्डसँग गरे गोप्य भेटवार्ता !
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदैँ गर्दा माधव नेपालले प्रचण्डसँग गरे गोप्य भेटवार्ता !
काठमाडौँ / यतिबेला देश कोरोनाको कहरले लपेटिरहेको छ । देशमा आंशिक लकडाउन छ । यता राजनीतिक दलहरु भने कुर्सीको दौडमा छन् । देशको राजनीतिले दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ मोडहरु लिन थालेको छ ।
यसैबीच, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बीचमा गोप्य भेटवार्ता भएको छ । माधव नेपालको निवास कोटेश्वरनजिकै रहेको व्यवसायी चन्द्रलाल श्रेष्ठको निवासमा प्रचण्ड र नेपालका बीचमा भेटवार्ता भएको हो ।
गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र अलग(अलग भएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा माधव नेपाल पक्ष परेको थियो । नेपाल पक्ष एमालेमै रहेपनि ओलीको चेपुवामा पर्दै आएका छन् । ओलीले नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई ६ महिना पार्टी सदस्यबाटै निलम्वन गरेका छन् ।
ओलीले नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्ने, नगर्नै भन्नेमा १० वैशाखको पार्टी महाधिवशेन आयोजक समितिको बैठकबाट स्थायी समितिमा अधिकार लिएर राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमै विश्वासको मत लिने भएपछि नेपाल र ओली पक्षको लडाईंको छिनोफानो पनि त्यही दिन हुने अवस्था निम्तेको छ ।
ओली पक्षले लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेललाई अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा दिन लगाई पुनः एकल बहुमतको सरकारका नाममा गरिएको नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एक भएका थिए । तर पछि अदालतले नेकपाको एकतालाई नै वदर गरेपछि भने छुट्टिएका नेपाल र प्रचण्डवीच पटक पटक यस्तै गोप्य संवाद हुँदै आएको छ ।
सरकारले विमानस्थल बन्द गरेपनि यी उडानहरु भने हुने
२३ गतेदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन र बैंकका सबै शाखाहरू बन्द, पसल पनि खोल्न नपाइने !
बाबुराम भट्टराई जसपाबाट आउट , यस्तो छ तयारी !
March 30, 2021 Ramash Kunwar
‘ओलीको सेटिङले ‘पूरै सहर’ आश्चर्यचकित !’
January 25, 2021 Ramash Kunwar